347Vac 150W Ọpụpụ Ike Mmepụta Ike  Kpọtụrụ ugbu a
CC LED Driver 40W IP65  Kpọtụrụ ugbu a
CC LED Driver 58W PWM / 0-10V Dimming  Kpọtụrụ ugbu a
CC 75W LED Driver PWM / 0-10V Dimming  Kpọtụrụ ugbu a
CC ọkwọ ụgbọala 100W IP65  Kpọtụrụ ugbu a
UL edepụtara 200W Aux 12V vs Dimming Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Klas 2 ikanye ọkwọ ụgbọ ala 12V 150W IP65  Kpọtụrụ ugbu a
40W 347Vac Wide input LED LED Driver  Kpọtụrụ ugbu a
60W LED Driver Waterproof IP65 Dimming Version  Kpọtụrụ ugbu a
Aluminom duuru dimkpa mode  Kpọtụrụ ugbu a
akụkụ intertek na-enwu ọkụ Akụkụ mmiri na-eduzi ọkwọ ụgbọ ala 200W  Kpọtụrụ ugbu a
100W Ọpụpụ LED Driver 347Vac  Kpọtụrụ ugbu a
240W 347Vac Driver LED  Kpọtụrụ ugbu a
Led Driver plastic Triac Dimmable Led Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Wide Input Voltage 347V linear Led Driver (slim)  Kpọtụrụ ugbu a
mgbanwe na-eduzi ịgbanyụ Linear butere ọkwọ ụgbọala 347Vac  Kpọtụrụ ugbu a
Lineer Driver ezigbo imewe maka Lineinuaires 30W  Kpọtụrụ ugbu a
Onye ọkwọ ụgbọala kwụ ọtọ Lightway 30W 50W 80W  Kpọtụrụ ugbu a
347Vac 150W Ọpụpụ Ike Mmepụta Ike
Min. Nhazi: 200 Piece/Pieces
Faver LED Lig hting Driver bụ ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji mee ike mpaghara ọ bụla, mpaghara mpaghara. Ma ịchọrọ ọkụ iji bulie n'ọhụhụ ma ọ bụ meziwanye nchekwa, ọkụ anyị na-anya ụgbọ ala bụ ụzọ kachasị dị mfe iji mee ka ìhè dị n'okporo ụzọ ọ bụla, ebe a na-adọba ụgbọala, ụzọ, okporo ụzọ, bọọdụ, akara, ahịrị...
CC LED Driver 40W IP65
Nkọwa Onye ọkwọ ụgbọ ala nke Fighter LED Street na-enwu ọkụ bụ ọrụ ọkụ ọkụ site na ijikọ ọnụ-ọnụ na atụmatụ dị ọcha. Ọ na - enye ndị ahịa uru nke ọkụ ọkụ - belata ike ọkụ, ọrụ ogologo oge na mmezi obere. Mgbanwe, nchekwa, ntụkwasị obi, Faver Street Light Driver bụ igwe ọkụ ọkụ Power Power Source zuru oke na usoro CFL...
CC LED Driver 58W PWM / 0-10V Dimming
Fahold Electronics Co., ltd redefine nka nke ọkụ ọkụ n’ime ụlọ, na-enye arụmọrụ dị elu na ọkwọ ụgbọ ala nke na-enweghị mgbagha maka ọkụ ọkụ, ọfịs ọfịs na ile ọbịa. Maka nnukwu mmiri ọkụ na ala bekee na-enye ọkụ na nnukwu ụlọ ọkụ, họrọ ndị ọkwọ ụgbọala Fahold Ntanetị Ngwaahịa Mmepụta mputa: 27-54V Max. Mgbapụta...
CC ọkwọ ụgbọala 100W IP65
UL edepụtara 200W Aux 12V vs Dimming Driver
Nkọwa: Usoro FD-200ExxxB na-arụ ọrụ site na ntinye 90 ~ 305 Vac. Ogige ndị a ga-enye 6A nke mmepụta ihe dị ugbu a na pọọlụ kachasị nke 54 V maka ike mmepụta kachasịnụ 200 W. Ezubere ha ka ha rụọ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi nke ukwuu. Atụmatụ ọkọlọtọ gụnyere njikwa dimkpa, nchebe ọkụ, nchekwa ọkụ, nchedo ọkụ dị...
Klas 2 ikanye ọkwọ ụgbọ ala 12V 150W IP65
Nkọwa: Usoro FD-150ExxxB na-arụ ọrụ site na ntinye 90 ~ 305 Vac. Ogige ndị a ga-enye ihe ruru 4.5A nke mmepụta ma ugbu a na mgbapụta kacha elu nke 54 V maka ike mmepụta kachasịnụ 150 W. Ezubere ha ka ha rụọ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi nke ukwuu. Atụmatụ ọkọlọtọ gụnyere njikwa dimkpa, nchebe ọkụ, nchekwa ọkụ, nchedo...
40W 347Vac Wide input LED LED Driver
Nkwakọ ngwaahịa: 15PCS / CARTON
Min. Nhazi: 300 Piece/Pieces
Faver LED Lig hting Driver bụ ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji mee ike mpaghara ọ bụla, mpaghara mpaghara. Ma ịchọrọ ọkụ iji bulie n'ọhụhụ ma ọ bụ meziwanye nchekwa, ọkụ anyị na-anya ụgbọ ala bụ ụzọ kachasị dị mfe iji nye ìhè n'okporo ụzọ ọ bụla, ebe a na-adọba ụgbọala, ụzọ, okporo ụzọ, bọọdụ, akara, ahịrị ma ọ bụ...
Aluminom duuru dimkpa mode
akụkụ intertek na-enwu ọkụ Akụkụ mmiri na-eduzi ọkwọ ụgbọ ala 200W
100W Ọpụpụ LED Driver 347Vac
Nkowa Nkọwapụta Ngwaahịa Nkọwa ngwaahịa Ming na-adọrọ adọrọ, ma a ga-agbanyụrịrị （0-100%） Dum paragraf enweghị flicker, Triple dimming 0-10V / PWM / PXDALI Karịa nchekwa ọkụ, nchekwa sekit dị mkpirikpi, nchedo sekit na-emeghe Nwere ike ịdị mma maka iru mmiri Klasị P nkwenye ngwaahịa 5years akwụkwọ ikike Nkọwa ngwaahịa...
Atụmatụ Nkwọ ụgbọ ala eletriki Kọmputa : Single ọwa mmepụta, mmepụta ugbu a Selectable site DIP SW Kwado 0-10V tinyere akara mgbawa, Passive ma ọ bụ ihe ngosi ọrụ. 100VAC ~ 277VAC Arụmọrụ dị elu ruo 88% Ọrụ PFC wuru na-arụ ọrụ 100% rụpụta mgbe enweghị ntinye mgbaàmà ọ bụla, enwere ike iji ya dịka ọkọnọ ike Mmetụta...
Nkọwapụta Ngwaahịa Atụmatụ ịnya igwe eji akwọ ụgbọ ala : Single ọwa mmepụta, mmepụta ugbu a Selectable site DIP SW Kwado 1-10V analog dimming signal, Passive ma ọ bụ arụmọrụ nọ n'ọrụ. 100VAC ~ 277VAC Arụmọrụ dị elu ruo 88% Ọrụ PFC wuru na-arụ ọrụ 100% rụpụta mgbe enweghị ntinye mgbaàmà ọ bụla, enwere ike iji ya...
Nkọwapụta Ngwaahịa Atụmatụ ịnya igwe eji akwọ ụgbọ ala : Single ọwa mmepụta, mmepụta ugbu a Selectable site DIP SW Kwado traic dimming signal, Passive ma ọ bụ arụmọrụ nọ n'ọrụ. Gburugburu ngbanye voltaji180VAC ~ 240VAC Nrụpụta dị elu ruo 84% Ọrụ PFC wuru na-arụ ọrụ 100% rụpụta mgbe enweghị ntinye mgbaàmà ọ bụla,...
Wide Input Voltage 347V linear Led Driver (slim)
Single ọwa mmepụta, mmepụta ugbu a Selectable site DIP SW Nkwado Dali / 0-10V analog dimming signal, Passive ma ọ bụ ihe ngosi ọrụ. Gburugburu ụdị ọkụ ọkụ ntanetị 120VAC ~ 347VAC Arụmọrụ dị elu ruo 88% Ọrụ PFC wuru na-arụ ọrụ 100% rụpụta mgbe enweghị ntinye mgbaàmà ọ bụla, enwere ike iji ya dịka ọkọnọ ike Mmetụta...
mgbanwe na-eduzi ịgbanyụ Linear butere ọkwọ ụgbọala 347Vac
Lineer Driver ezigbo imewe maka Lineinuaires 30W
Nkọwapụta Ngwaahịa Atụmatụ ịnya igwe eji akwọ ụgbọ ala : Single ọwa mmepụta, mmepụta ugbu a Selectable site DIP SW Nkwado Dali / 0-10V analog dimming signal, Passive ma ọ bụ ihe ngosi ọrụ. 100% (120) VAC ~ 277VAC Arụmọrụ dị elu ruo 88% Ọrụ PFC wuru na-arụ ọrụ 100% rụpụta mgbe enweghị ntinye mgbaàmà ọ bụla, enwere ike...
Onye ọkwọ ụgbọala kwụ ọtọ Lightway 30W 50W 80W
Single ọwa mmepụta, mmepụta ugbu a Selectable site DIP SW Nkwado Dali / 0-10V analog dimming signal, Passive ma ọ bụ ihe ngosi ọrụ. Gburugburu ụdị ọkụ ọkụ ntanetị 120VAC ~ 277VAC Arụmọrụ dị elu ruo 88% Ọrụ PFC wuru na-arụ ọrụ 100% rụpụta mgbe enweghị ntinye mgbaàmà ọ bụla, enwere ike iji ya dịka ọkọnọ ike Mmetụta...
Ebugharị na-emezi ihe ngosi redio 240W Street.  Kpọtụrụ ugbu a
Ike Power Nye Street Light Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkụ ụgbọala ụgbọala 347V maka ọkụ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
Volta Voltage 480V Ọkwọ ụgbọala Ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
36W 250-1200mA Dimmable LED Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Okpukpo mgbochi ọkwọ ụgbọala na-adị ugbu a  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe mmezi a na-agbanwe agbanwe nke a na-eme ka ọkwọ ụgbọala dị n'elu  Kpọtụrụ ugbu a
Ogwe Ịgba Ọkụ Elu  Kpọtụrụ ugbu a
Ọga n'ihu ugbu a ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ 50W  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkwọ ụgbọala na-adọkpụ Ọwa Nyocha Linear Ọkụ ụgbọ ala n'okpuru ọkụ LED Linear Driver Mmiri Ọkụ Mmiri nke mmiri DC12 / 24V ọkwọ ụgbọala ọhụụ Ọkwọ ụgbọala ọkụ Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ